मेरो विचारमा, एसईओमा नतिजा ल्याउने कुञ्जी शव्दहरू पहिचान गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका भनेको एउटा सानो गुगल एडवर्ड्स अभियानको साथ सुरु गर्नु हो सजिलै किवर्डहरूको प्रदर्शन परीक्षण गर्न र कसरी मानिसहरूले मेरो व्यवसाय अनलाइनलाई अझ राम्रोसँग पहिचान गर्न सक्छन्। १ महिना पछि तपाईंसँग जैविक परिणामहरूको लागि उत्कृष्ट अनुकूलन गर्न पर्याप्त डेटा हुन सक्छ।
उत्कृष्ट विधि जुन वास्तवमै राम्रोसँग काम गर्दछ! कहिलेकाहीँ हाम्रा ग्राहकहरूले हामीलाई त्यो विकल्प दिँदैनन् - तर हामी प्रायः तिनीहरूसँग कुरा गर्ने प्रयास गर्छौं! तपाईं PPC मार्फत सयौं वा हजारौं संयोजनहरू परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो थप्नु भएकोमा धन्यवाद!